tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-07-27
Indraindray, raha mieritreritra ianao fa tsotra loatra ny fiakanjoanao ivelany, dia azonao atao ny manomana satroka baseball amin'ny fomba fanatanjahan-tena mahazatra. Ho fanampiana be dia be amin'ny fombanao izany. Tsy mila zavatra kely loatra handravahana azy io, ary ny satroka baseball dia mety hahatonga ny fombanao ho maotina sy kanto, fa inona ...
Lalàna fa zazavavy maro no tia ny satroka fisaka, satria amin'ny fanaovana azy io, na dia olon-tsotra ianao, dia hatao hoe "fashionista". Ny fanontaniana mipetraka dia hoe, inona no fomba tsara indrindra anaovana akanjo fisaka mba ho tsara tarehy? Inona avy ireo satroka volom-borona? Inona ny endrika bika mety amin'ny ...
Ahoana ny fomba hisafidianana lamba ho an'ny satroka
Avelao aloha hiresaka momba ny satroka Cotton twill, misy maromaro ampiasaina matetika. Matetika ny lamba tsirairay dia misy isan'ny kofehy sy ny hakitroky azy. Ny isa kofehy dia manondro ny hatevin'ny kofehy tenona. Density: ny atin'ny isan'ny kofehy isaky ny faritra iray, matetika amin'ny 4 santimetatra toradroa. Arakaraka ny maha lehibe ny isa ...
Inona no satroka tsara indrindra ho an'ny vehivavy
Ho an'ny akanjo ivelany, na inona na inona karazana, miaraka amin'ny satroka no fomba mora indrindra hahatonga anao ho kanto eo noho eo. Ka inona ny karazana satroka azonao atao? Ho an'ireo vehivavy tia miakanjo dia safidy lamaody sy maharitra ireo, ary safidy hendry izany. Na izany aza, raha tsy mahalala betsaka momba ny satroka ianao, ny vari ...
Ny niandohan'ny Fedora
Angano iray taonjato iray, ny sarimihetsika mitovy amin'ny 1935, manaitra ny famolavolana ny afisy. T ...
Ny niandohan'ny satroka tany Sina
Amin'ny ririnina dia matetika manao satroka ny olona hisorohana ny hatsiaka ary hanafana hatrany. Nefa rehefa nanomboka nampiasa satroka ny olona dia tsy natao hanafanafana azy ireo akory fa hanaovana azy ho firavaka. Tany am-piandohana dia noforonina tany amin'ny firenentsika ny satroka, ny andian-teny hoe "satro-boninahitra" "avo feo", "satroboninahitra", dia manondro ny ...